China Monkey inoratidzira mesh, tunnel mesh fekitori nevatengesi | Gepair mesh
Monkey inoratidzira mesh, tunaki mesh
Iyo Exhibit Tunnel mesh system ine yakagadzirwa nemaoko yakagadzirwa nesimbi isina waya waya tambo tambo mesh inotsigirwa neiyo simbi yesimbi yakatenderedza zvindori kuti iite chimiro chechimiro.Imupfungwa inoshandura mutsva kubvumidza kutariswa kwe600 kune vashanyi veZoo apo ichigadzira nzvimbo yakachengeteka.
Iyo waya isina tambo yesimbi tambo mesh ine maitiro akawanda, ichiita kuti ive yakanakira kune monkey enclosure mesh, yakakodzera mhembere huru, dzepakati uye diki, yakaiswa monkey enclosure mesh, kuratidzwa kwemonkey, monkey cage, monkey fenzi, monkey barriers netting.
Iyo monkey tunnel net yakagadzirwa nesimbi isina tsvina uye yakarumurwa kubva kune isina waya yesimbi waya tambo. Iyi mambure inoshanduka-shanduka inogona kupetwa uye yakarukwa, uye inogona kugadzira pombi chimiro pasi petsigiro yedenderedzwa yesimbi.
Stainless simbi monkey tunnel mesh, tunnel net inowanzoshandiswa kune ese marudzi emakonzo, kunyanya zvidiki primate uye nyani. Iyo dhayeti yematehwe mesh inowanzoita masendimita makumi mashanu neshanu, uye kureba pakati pezvindori zvesimbi kunowanzoita anenge 200 cm. Izvo zvigadzirwa zvinowanzoshandiswa neMonkey Tunnel Mesh ndeye GP1651, GP2051 GP2476, nezvimwewo, uye zvigadzirwa zvinowanzoshandiswa neTiger Tunnel Mesh ndiGP3251, GP3276, nezvimwe.
Yepfuura: Aluminium cheni yekudonha mesh
Inotevera: Z inoumbwa nesimbi isina girazi pasi pemahara waya mesh conveyor bhandi
Monkey kuratidza mesh
Flexible simbi isina cheni yakarukwa mesh (Inte ...
Anti-kudonhedza waya tambo net
Dema Oxide Isina Stadhi Cable Mesh
Anochinjika simbi yesimbi ndege aviary mesh